Accueil > Gazetin'ny nosy > France: Sakaizan’ny mpandresy
France: Sakaizan’ny mpandresy
Lasa any France avokoa ny mpanao pôlitika malagasy raha vao mihevitra hitondra ny firenena. Hatrany amin’ny andron’ny repoblika voalohany dia manao izay hifehezana ny mpitondra ny firenena Malagasy ny fanjakana frantsay. Asiany amin’ny fitenenana hoe mifamatotra ara-tantara ny firenena roa tonta ka tsy afa-misaraka. Ny fanjakana frantsay tokoa no nanjanaka an’i Madagasikara nandritra ny 60 taona mahery ka marina ny voalazany. Efa toa lasa manana kolotsaina frantsay aza ny Malagasy maro, ary isika koa mpikambana ao amin’ny vondron’ny tany miteny amin’ny ampahany sy tanteraka ny teny frantsay (Frankôfônia). Teto Madagasikara tokoa no nanaovana ny fivoriambe nataon’ity vondrona ity ny taona 2016 iny. Tamin’ny taona 1997 dia teto Madagasikara koa no nanatanterahana ny lalao fahatelo nantsoina hoe “Jeux de la Francophonie” izay isan’ny fifaninanana lehibe ara-panatanjahan-tena sy kolotsaina amin’ny tany miteny frantsay.
Ireo fihetsiketsehana ireo dia azo lazaina fa endrika ny fifandraisan’ny roa tonta amin’ny lafiny maro. Tsy ny lafiny kolotsaina sy ny pôlitika ihany fa hatrany amin’ny toe-karena koa.
Ingahy Ratsiraka Didier raha toa ka niverina tamin’ny fitondrana tamin’ny taona 1997 dia nanambara koa fa niverina indray ny mariazy ny firenena roa tonta. Ity Amiraly ity nefa dia isan’ny Malagasy nanapaka ny fifanarahana nantsoina hoe “Accord de coopération” tamin’ny frantsay tamin’ny taona 1973, ka nahatonga an’i Madagasikara tsy niankina ara-bola sy toe-karena tamin’ny frantsay intsony.
Ingahy Ravalomanana Marc indray dia nandeha nitodi-doha tany amin’ny Amerikanina sy ny Afrikanina tatsimo ary ny Rainiboto (Allemand) tamin’ny taona 2001 ka hatramin’ny 2009, ka iny niongana teo amin’ny fitondrana iny ny niafarany. Nieritreritra ny hanova ny kolotsaina teto Madagasikara ingahy Ravalomanana Marc ka nidoboka niafarany.
Ankehitriny indray dia iaraha-mahalala fa lasa nandeha nankany Parisy renivohitra ny fanjakana frantsay avokoa ireo mieritreritra hitondra firenena. Ingahy Hery Rajaonarimam-
pianina dia tsy lazaina intsony ny fivezivezena ataony mankany Frantsa. Raha kely indrindra dia in-telo isan-taona. Ny farany dia iny nanao fanazavana mahakasika ny fisandratana teny Iavoloha iny ny herinandro lasa teo. Fisandratana izay midika koa hoe “émergence” amin’ny teny frantsay. Mazava ho azy fa misy zavatra lehibe fonosin’ny pôlitika iny avy amin’ny Frantsay nahatonga azy nanao iny fampisehoana iny. Mbola tamin’ny zoma lasa teo koa dia tany frantsa ingahy Andry Nirina Rajoelina no nanambara ny fomba hitondrany ny firenena koa ka nohindrahindrainy tamin’izany koa ity fisandratana ity. Dia mbola ny Frantsay ihany no aorian’izany, ary tsy niafina mihitsy ity filohan’ny tetezamita ity nampibaribary izany fiarahany amin’ny Frantsay izany satria dia vazaha menasofina (Frantsay) avokoa no nanotrona azy.
Ingahy Orlando Robimanana koa izay mieritreritra ny hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena dia nandry ilika tany amin’ny Frantsay koa tao anatin’ny taona vitsy izay. Voalaza aza fa ity olona ity no tompon’ilay boky voalohany nampanaovin’ny Frantsay mahakasika ity fisandratana ity na ilay “émergence” izay noresahan’ireo roalahy teo aloha. Maro ny resaka mandeha mahakasika izany amin’izao fotoana izao momba io raharaha io fa naka tahaka hono iretsy niteny voalohany.
Tsy izany nefa ny hevitra ny mpandinika pôlitika fa programan’ny Frantsay avokoa ireo lazaina hataon’izy telo lahy ireo.
Tsy izy telolahy ihany nefa no mihaodihaody sy mitady fanohanana amin’ny Frantsay fa hatramin’ingahy Ravalomanana Marc ihany koa. Nisy mihitsy aza ny fotoana nilazan’ity filoha teo aloha ity fa mihaona matetika amin’ny olona ambony frantsay izy.
Ireo rehetra no porofo mitohaka amin’ny tendany fa sakaizan’ny mpandresy ny Frantsay amin’ity fifidianana ho avy amin’ny 2018 ity, ka izay lanin’ny vahoaka eo dia olona efa nifanaraka taminy avokoa.
Ireo aloha no fantatra hatramin’izao ka iza indray no olona manaraka ?